एसईई स्थगितप्रति सरोकारवाला असन्तुष्ट, भन्छन्– अपरिपक्व निर्णय
दिनेश गौतम काठमाडौं, ५ चैत
सरकारले एक दिनअघि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) स्थगित गरिदिएकाे छ । विश्वभर फैलिएकाे काेविड-१९ काे प्रकाेप नेपालमा फैलिन नदिन भन्दै सरकारले पूर्वसन्ध्यामा एसईई स्थगित गर्नुपरेकाे बताएकाे छ । तर, सराेकारवालाले भने सरकारकाे यस्ताे निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
एसईईकाे सम्पूर्ण तयारी पूरा भएकाे थियाे । बिहीबार देशभरका १ हजार ९ सय ९५ परीक्षा केन्द्रबाट ४ लाख ८२ हजार ७ सय ७ परीक्षार्थी मानसिक रूपमा तयार भएर बसेका थिए । अन्य सबै खालका तयारी सकेर विद्यार्थी परीक्षाको प्रतिक्षामा थिए ।
अन्तिम समयमा आएर परीक्षा राेकिँदा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक–शिक्षाका, विद्यालय सबै अन्योलमा परे । सराेकारवालाले सरकारकाे याे निर्णयलाई 'अपरिपक्व' भनेका छन् । केही महिना अघिबाटै काेराेना भाइरसकाे त्रास फैलिए पनि सरकारले हिजाेआजै फैलिएजस्ताे गरी परीक्षा स्थगित गरिदिएकाेप्रति अभिभावकलगायत शिक्षा क्षेत्रका सम्बद्ध व्यक्तिले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
कोरोना भाइरसले विश्वमा आतंक मच्याउन थालेपछि शिक्षासँग सरोकार राख्ने निकाय र व्यक्तिहरूले परीक्षा स्थगित गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । उनीहरूले सरकारकाे ध्यानाकर्षण पनि नगराएका हाेइनन् । तर, त्यतिबेला सरकारले खासै वास्ता गरेन ।
एक दिन अगाडि सरकारले परीक्षा स्थगित गरेपछि सरोकारवाला निकायसमेत आश्चर्यमा परेका छन् ।
प्रश्नपत्र र उत्तर पुस्तिकासहित केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक, सुरक्षाकर्मी सबै परीक्षा केन्द्रमा पुगिसकेका छन् । दुर्गम क्षेत्रमा हप्तौ अगाडि नै परीक्षाको सबै सामग्री पुर्‍याइएकाे छ ।
यति मात्र होइन, कतिपय दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थी केही दिन अगाडि नै परीक्षा केन्द्र नजिक कोठा भाडामा लिएर बसेका छन् । अन्तिम समयमा परीक्षा स्थगित भएपछि विद्यार्थीहरू अन्याेलमा परेका छन् । कतिपयमा मनोवैज्ञानिक असर पनि परेकाे हुन सक्छ । अब कहिले परीक्षा हुने हो, अन्याेल कायमै छ । अब ती विद्यार्थी घर फर्किने कि परीक्षा केन्द्रमै परीक्षाको प्रतिक्षामा बस्ने ? परीक्षा केन्द्रमा पुर्‍याइएको प्रश्नपत्र र उत्तर पुस्तिका सुरक्षित रहलान् ?
सरकारले अन्तिम समयमा गरेको निर्णयलाई शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूले गैरजिम्मेवार र अपरिपक्व भनेका छन् ।
सरकार संवेदनशील देखिएन
सुवास न्यौपाने, महासचिव, नेसनल प्याब्सन
कोरोना भइरसको त्रासमा विद्यार्थीले परीक्षा दिन सक्दैनन् भनेर धेरै अगाडि नै शिक्षा मन्त्रालयलाई परीक्षा रोक्न पटक–पटक अनुरोध गर्‍यौं । यो मौसम परिवर्तनको समय पनि हो । यस्तो अवस्थामा परीक्षा भन्दा जीवन ठूलो हो भन्दा सरकारले सुनेको नसुनेझैं गर्‍यो ।
अन्तिम समयमा आएर स्थगित गर्नु गलत हो । बिहान एउटा बेलुका अर्को निर्णय गर्ने कस्तो सरकार हो ? सरकार संवेनशील नभएको स्पष्ट भएको छ ।
सरकारले काम देखाउन खोजेको
थकिनकुमार गुरुङ, अध्यक्ष, प्याब्सन बागमती प्रदेश
विद्यार्थीलाई झन प्रेसर दिने काम भयो । परीक्षाको तयारी सकेर बसेका विद्यार्थीमा फेरि नपढ्ने प्रवृत्ति पढ्छ ।
कोरोनाको सावधानी अपनाएर भए पनि परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । सरकारले आफ्नो काम देखाउन खोजेको मात्र हो । तीन घण्टाको परीक्षाको लागि केही असर पर्ने थिएन । देशमा संकटकै स्थिति भएको भए फरक कुरा हुने थियो ।
शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति
ईश्वरी लामिछाने, प्रिन्सिपल, अरुणीमा शैक्षिक प्रतिस्ठान
सरकारको निर्णयले लाखौं विद्यार्थीलाई थप तनाव थपिएको छ । कोरोनाले विश्वभर आतंक मच्याएको जगजायर छ ।
सरकारले पहिल्यै गर्नुपर्ने निर्णय ढिला गर्‍यो । यसबाट विद्यार्थीलाई मात्र होइन राज्यलाई पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । देशको बजेट समेत खेर गयो । सरकारको कमजरी देखिन्छ ।
सरकार संवेदशील देखियो
भेषराज पोखरेल, कार्यकारी निर्देशक, टेक्सास इन्टरनेसनल
सरकारले ढिला गर्‍यो । तर सही निर्णय गरेको हो । विद्यार्थीप्रति अन्तिम समयसम्म पनि सरकार संवेदनशील देखिएको छ । परीक्षा १ महिना सरेर केही असर हुँदैन ।
अन्तिम समयसम्म पनि परीक्षा नरोकौं भनेर सरकार लागेको हो । तर, छिमेकी देशमासमेत कोरोना फैलिएपछि परीक्षा रोक्नु स्वभाविक हो ।
अन्तिम समयमा आएर परीक्षा स्थगित गर्नु अपरिपक्व निर्णय हो । ५ दिन अगाडि नै गर्नुपर्ने निर्णय अन्तिम समयमा आएर गर्दा विद्यार्थीलाई कस्तो असर पर्छ ?
विद्यार्थी तयारी अवस्थामा थिए । सबै तयारी सकेपछि स्थगित गर्नु राम्रो होइन । परीक्षा स्थगित हुनुपर्थ्यो । तर, अन्तिम समयमा होइन ।
डा. राजेन्द्र केसी, प्रमुख, साउथ वेस्टनस्टेट कलेज
विश्वलाई हेर्दा बेठीक होइन । किनभने, कोरोना फैलिएका देशहरूमा सबै बन्द भएका छन् । त्यस हिसाबले नेपालमा पनि बन्द गर्नु ठिकै हो ।
तर, अन्तिम समयमा स्थगित गर्दा विद्यार्थीमा नाकारात्मक असर चाहिँ पर्न सक्छ । विश्वलाई हेर्ने हो भने परीक्षा स्थगित गरेको राम्रो हो । सबैतिर बन्द नै छन् । स्वास्थ्य पहिले हो । तर पहिल्यै गरिदिएकाे भए कसैले भन्ने ठाउँ पाउँदैन थिए ।
परीक्षा सामग्री सुरक्षा निकायमा सुरक्षित रहन्छ : पनिका
परीक्षा स्थगित भएपछि केन्द्रमा पुर्‍याइएकोका प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिकालगायतका सामग्रीकाे सुरक्षा परीक्षा केन्द्र नजिकै रहेका सुरक्षा निकायले गर्ने भएका छन् ।
परीक्षा स्थगित भएलगत्तै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले मातहतका निकायमार्फत परीक्षा स्थगित गर्न र परीक्षा सामग्री सुरक्षित राख्न सर्कुलर गरेको हो ।
‘सबै केन्द्राध्यक्षलाई परीक्षा नगर्न सर्कुलर भइसकेको छ’, परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलले शिलापत्रसँग भने, ‘परीक्षा सामग्रीको सुरक्षाप्रति चिन्ता लिनुपर्दैन । हामीले सुरक्षा निकायलाई भनिसकेका छौं ।’
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत ५, २०७६, १०:०२:००
लकडाउन लम्बिए नयाँ शैक्षिक सत्र के हुन्छ ?